Maxaad ka Ogtahay Caabuqa Caalamka Kaga Cabaadiyey ee Korona Fayras? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Mawliid Axmed Xassan — April 22, 2020
Fayraska coronavirus waa qoys balaadhan (coronaviridae) oo ka mida fayruusaadka sababa cudurada ku dhaca xayawaanka iyo bini-aadamkaba. Fayraska coronavirus waxa uu leeyahay noocyo kala duwan, qaar ku dhaca xayawaanka iyo kuwakale oo u kala gudba xayawaanka iyo bini-aadamka (zoonatic disease).
Sidaan wada ogsoonahay coronaha ku dhaca aadamahu wuxuu haleelaa hawa-mareenka, kaas oo ku sababi kara caabuq.
Hadaba muxuu yahay korona fayraska cusub?
Dabayaaqadii sanadkii tagay december 2019 waxa magaalada wuhan ee dalka china ka dilaacay corona cusub, kaas oo loo bixiyey COVID-19 (Wuhan korona fayras). Cudurkan oo faroba’an ku haya dalka chinaha ayaa ku sii fidaya caalamka intiisa kale iyada oo diyaar garaw loogu jiro ka hortagiisa, Waxaana la aaminsan yahay in cudurkan asalkiisu ka yimi xayawaan, waana fayras la is qaadsiiyo oo sababa caabuqa neefsashada. Khubarada caafimaadka ayaa walaac daran ka muujiyey cudurkan maadaama oon laga hayn xog dhamaystiran, loona hayn talaal iyo dawo rasmi ah.
Calaamadaha lagu garto fayraska covid-19:
Calaamadaha lagu garto qofka cudurkani hayo wax ka mida:
Xumad (qandho) saraysa, daal, qufac qalalan, neefta oo qofka ku yaraata ama ku adkaata, madax xanuun, kulka jidhka oo kor u kaca iyo kalyo xanuun.
Qabkee ama sidee ayuu u faafa fayraska covid-19:
Fayruuskani wuxu ku faafa in aad la tacaamusho qof qaba cudurkan, waxaana lagu kala qaada:
1. Qof qaba cudurkan oo kugu ag qufaca ama hindhisa.
2. Qof cudurkan qaba oo ku salaama ama ku taabta.
3. Taabashada shay ama meel uu yaalo Fayraska Corona kadibna gacantaada aad ku taabato afka, sanka ama indhaha.
Fayraskan covid-19 qof kaste wuu ku dhici kara laakiin waxa aad ugu sii nugul dadka waawayn, qofka uu difaaciisu hooseeyo iyo qofka xaaladiisa caafimaad ay liidato. Calaamadaha fayraskan intee in leeg ayey kaga soo muuqan karaan qofka cudurkani ku dhaco(incubation period).
2Maalin ila 14 maalmood inta u dhaxaysa ayey calaamaduhu kaga soo muuqanayaan qofka.
Qaabkee la iskaga ilaalin kara ama looga hortagi kara fayraskan.
1. Nadiifi gacmahaaga si joogto ah, kuna dhaq saabuun, biyo diiran ama daawooyinka gacmaha lagu nadiifiyo.
2. Iska ilaali inaad taabato afkaaga, sankaaga ama indhahaaga gacmahaaga oo nadiif ahayn.
3. Ka fogow qof kaste oo cudurkan qaba ama leh calaamadihiisa oo kale.
4. Waa in si fiican loo kariyo hilibka iyo beedka.
5. Iska ilaali taabasha xoolaha.
6. Adeegso maro ama tiish marka aad hindhisayso ama aad qufacayso.
7. Ku dadaal nadaafadaada iyo ta gurigaaga.
8. Ka dheeraw meelaha dadku iskugu yimaadaan.
F.G: XASUUSNAW W-U-H-A-N
U- Use face mask properly
H- Have temperature checked regularly
A- Avoid large crowds
N- Never touch your face with unclean hands
Ila hada saynisyahaniinta iyo khubarada caafimaadku waxay ku hawlan yihiin sidii ay ugu heli lahaan talaal ama dawo lagaga hortago cudurkan. Laakiin weli wax natiijo ah ma aysan gaadhin. Waxa lagula talinaya qafka xanuunkani ku dhaco inu qaato cabitaano badan oo diiran, in uu si fiican u nasto, isaga oo qaadanaaya dawooyinka hoos u dhiga xumada, heer kulka jidhka iyo xanuunkaba.
W/Q: Mawliid Axmed Xassan (Mawliid Qanciye)
Tags: Maxaad ka Ogtahay Caabuqa Caalamka Kaga Cabaadiyey ee Korona Fayras?
Next post Xirfadaha Gawaarida: Qaboojinta Matoorka, Ciladaha Kudhaca Gaariga, Baarista Ciladaha
Previous post Tirada Axaadiista Rasuulka (SCW) ee Saxiixa ah